HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO TALAADO 11-KA JUUN 2019-KA
Tuesday June 11, 2019 - 09:44:00 in Wararka by Mogadishu Times
GUDDOOMIYAHA G/BANAADIR OO UNDP KALA HADLAY HORUMARINTA CAASIMADDA Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Md. Cabdiraxma an Cu mar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa xarun ta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ku qaabilay Wakiilka cusub ee H
GUDDOOMIYAHA G/BANAADIR OO UNDP KALA HADLAY HORUMARINTA CAASIMADDA Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Md. Cabdiraxma an Cu mar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa xarun ta Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar ku qaabilay Wakiilka cusub ee Hey'adda UNDP u qaabilsan Soo maaliya, Jocelyn Mason iyo xubno ka tirsan Howlwadee nada xafiiskiisa.
Eng. Yarisow ayaa ugu horeyn Mr. Joc elyn kusoo dhawee yay Muqdisho, isa goo warbixin ka sii yay Howlaha ay isla wa da an Maamulka G/ Banaadir iyo Hey’ adda UNDP. Gudd oomiyaha ayaa sheegay in hay ’adda UNDP ay ka fiiayaan mashaa riic dhowr ah oo lagu horumarinayo Caas ima dda in ay fuliyaan.
Jocelyn Mason, Wakiilka UNDP ee So omaaliya ayaa waxa uu ka mahadc eliyay soo dhaweynta Duqa Muqdisho, isagoo dhinaca kale xusay in ay sii xoojin doona an wada shaq eynta kala dhaxeyso Maam ulka Gobolka Banaadir.
GAARI LAGU WEERARAY DULEEDKA DEGMADA CEELWAAQ
Wararka laga helayo duleedka degma da Ceelwaaq ee G/Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in rag la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerare en gaa rimarayay duleedka degmadaas.
Gaariga la weeraray oo ah nooca loo yaqaano Landcruiser ah ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen rag hubeysan, wax aana jira khasaaraha kala duwan oo ka dha shay weerarkaas.
Lama oga khasaaraha Rasmiga ah ee dhashay weerarkaas,waxaana goobta uu weerarka ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Kenya.
Weerarka ayaa ka yimid,ka dib wax ka yar 12 saacadood gudahood markii Sird oonka Kenya ay ka digeen Weerar Al-Shab aab la damacsan yihiin Gaadiidka Dadw eynaha ee iska ga kala Goosha Magaalo oyinka Mandera iyo Nayrobi isla ma rkaana hakad la galiyay.
MAXKAMAD DAMBI DIL IYO KUFSI AH KU HESHAY 6-RUUX
Caro iyo xaalad aan daganeyn oo ka ji rtay maamulka Hindiya ee dhinaca Kash miir,ka dib waxaa Shalay Maxkamad la
soo taagay lix qof oo lagu soo eedee yay in ay ka dambeeyeen dhimasha da Gabar yar oo muslim ah oo hal sano ka hor la gu dilay halkaasi.
Maxkamad ku taala dalka Hindiya,gaar ahaan gobolka Bunjaab M/Srinagar ayaa dacwad la xiriirtay dil iyo kufsi ku heshay 6-ruux oo Gaangiistarro ah oo sanadkii ta gay ka dambeeyay dhim ashada Gabar 8-sano jir ah oo ka soo jeeda Muslimiinta Kashmiir.
Falkaasi dilka iyo kufsiga ah oo sanad ka hor ay geysteen 8-ruux ayaa warku in taa ku daray In 6-ka mid ah 8daasi ruux la gu helay dambiga,waxaana la lagu wadaa in lagu dhawaaqo xukun ka raggaasi.
Gabadha yar oo la tilmaamay inay ah eyd 8-sano jir reer baadiye ah ayaa sanad ka gor meydkeeda laga helay xaafadda Kathua ee maamulka Hindiya ee Kashm iir.
MAXAABIIS LOO WAREEJIYAY XABSIGA CUSUB EE MUQDISHO
Taliska Booliska Soomaaliyeed iyo Maa mulka gobolka banaadir ayaa Shalay tiro Maxaabiis ah oo ku xirneyd Xabsiga Dhexe ee Muqdisho waxa ay u ware ejiy een Xabsiga weyn ee dhawa an laga dhi say du leedka Koonfureed ee Magalada Muqd isho.
Waa markii ugu horeysay oo Xabs iga as dad lagu xiro tan iyo markii la dhi say, waxaana Shal ay la geeyay 58 Maxbuus,kuwaas oo laga wareejiyay Xabsiga dhexe ee Magalada Muqdisho.
Goobta wareejinta ayaa waxaa ku sug naa Xeer Ilaaliyaha Qaranka,taliyaha Ciid anka Booliska Soomaaliyeed, Duqa Magal ada Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas’uuliyiin kale.
BANAANBAX KA SOCDA XAAFADO KA TIRSAN BALADWEYNE
Magalada Baladweyne ee Xarunta Go bolka Hiiraan waxaa ka dhacay Bannaan bax looga soo horje edo Mad axweynaha Maamulka Hir-Shabel ele laguna taageer ayo guddoomiyihii xil ka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) Dadweynaha ku nool M/Ba dankood ayaa bannaanbaxaas ka qeyb galaya, iyaga oo wata boorar ay ku qoran yihiin Erayo ay ka mid yihiin
( KA DHIIDHI DHIBAATADA HIR-SHABLLE KU HEYSO GOBOLKA HIIR AAN).
Bannaanbaxayaasha ayaa waxaa ay dhagxaan waaweyn ku xireen wadooyin ka qaar ee Magalada Baladweyne, iyaga oo ku dhawaaqaya Erayo ay ku taageeray aan guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Hiiraan.
Wariyeyaal ku sugan M/Baladweyne ayaa waxa ay soo sheega yaan in bann aanbaxa uu saameyn weyn ku yeeshay goobaha Gana csiga qaar ee M/Baladwey ne oo Shalay xiran.
Tan iyo Markii Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Ca bdi Waare u she egay in uu xilkii ka qaaday G/Go bolka Hii raan ayaa wax aa xiisad kacsa naan ah la ga dareemaya M/Bala dweyne, iyada oo Dabageed uu xil ka qaadistiisa uu ku tilma amay Sharcidarro. Xigasho: Radio risaala.com
WAFDI LOO DIRAY DEEGAAN DHAWAAN AY LA WAREEGEEN AL-SHABAAB
Maamulka Puntland ayaa wafdi heer wasiiro ah waxaa ay u direen deegaanka Af-U rur ee Gobolka Bari,halkaas oo dhaw aan ay la wareegeen xubno ka tirsan Al-Sha baab.
Ciidamada Puntland ayaa si lama filaan ah waxaa ay uga soo baxeen deega ankaas,waxaana saac ado kadib la war ee gay xubno ka tirsan Al-Sha baab oo ku sugnaa mee laan ka fog eyn deega anka Af-Urur.
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Maa liyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ay aa waxaa ay gaareen deegaano ku yaalla Buuraha Galgala oo waxyar u jira deega ankaAf-Urur oo ay weli gacanta ku haya an Ururka Al-Shabaab.
Wafdiga ayaa waxaa ay haatan kula mo la leeyihiin Saraakiil ka tirsan Ciidam ada Puntland oo ku sugan buuraha Galgal a,iyaga oo kala hadlaya sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deega anka Af-Urur.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo Warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in Saraakiisha Ciidamada ay isku-afgarteen in si deg deg ah loo qaa do dagaal ka dhan ah Al-Shabaabka la wareegay deegaanka Af-Urur.
Deegaanka Af-Urur ayaa waxaa uu ka mid yahay deegaanada muhiimka ah ee Gobolka Bari,waxaaana Al-Shabaab ay qabsadeen markii labaad,iyada oo 8-dii Bishii jube Sanadkii 2017 ay la wareegeen wallow markii dambe isaga baxeen.
MAAMULKA G/SHABEELLAHA DHEXE OO BAAQ SOO SAARAY
Maamulka gobolka shabeellaha Dhexe ayaa ugu baaqay Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka gaar ahaan siyaa si yiin ta, culumaa’udiin ka, dhalinya rada, aq oonyahanada ee ka soo jeeda deegaan ada gobolka shabee llaha dhaxe gaar aha an dagmada warsheekh in ay ka qeyb qaa taan dib u dhiska wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Warshiikh ee gobolka Shab eellaha Dhexe oo bacaad fadhiya taas oo wax ka tari doonta isku socodka dadka iyo gaadiidka.
Guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada Warshiikh in ay gacmaha is qabsadaan ayna u soo jeestaan horu marka gobolka gaar ahaan degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Guddoomiyaha degmada Warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe Axmed Xusen Axmed(Axmed Shiidka) ayaa balan qaaday in uu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka degmada.
Guddoomiyahii hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Caddow Axmed Daaci oo ka mid ah siyaasiyiinta Soom aaliyeed ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta odayaasha iyo wax garadka ku nool gobolka Shabeellaha dhe xe gaar ahaan shacabka ku nool degmada Warshiikh inay ka shaqeeyaan horumarka degmada gaar ahaan dhinacyada ammaan ka degmada Warshiikh iyo deegaanada hoos yimaado oo mararka qaar la sheegay in ay dadku ku waxyeeleeyaan male eshiy aad.
MADAXWEYNE FARMAAJO OO AMISOM KALA HADLAY LA-DAGAALANKA AL-SHABAAB
Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahn a Madaxa how lgalka AMISOM Francisco Madeira, ayaa la kulmay Madaxweyna ha JFS Md. Maxamed Cabdull aahi Farmaa jo,isagoo kala hadlay dowrka AMIS OM ay ka ciyaareyso xasilinta So omaaliya ka dib markii dhowaan Howlgalka AMISOM ee Soomaal iya waqti kordhin loo sameeyay.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa bishii hore dabayaaqadeedii qaatay go’aanka ah 2472 kaas oo waqti kordhin loogu sameeyay howlgalka AMISOM, wax aana Golaha ammaanka uu ansixiyay in 1000-askari laga dhimo tirada AMISOM ee ka howlgasha Soomaaliya si waafaqsan Qor shaha Ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya oo si tartiib ah loogu wareejiyo mas’uuliyadda amniga dalka Ciidanka Qaranka Soomaa liya. "Dhammaanteen waxaan isku raacnay in AMISOM xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo Soo maaliya si ay gacan uga geysato soomaliya dadaalkeeda ah in la xasiliyo dalka lagana saaro Al-Shabaab. Dadaallada wadajirka ah waa in ay sii socdaan, Al-Shabaab waa in la xakameeyaa, "ayuu Ambassador Madeira ku sheegay wareysi uu bixiyay ka dib markii uu shirka soo idlaaday.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Madeira ayaa ka wada hadlay horu marada laga gaaray qeybaha amniga,gaar ahaan waxay si aad ah diirada u saareen deegaanadii dhowaan ay la wareegeen ciid anka Xoogga dalka oo kaashanaya AMIS OM ee Sabiib iyo Bariire oo ka tirsan Gob olka Shabeelaha hoose.
” Tani waxay ku tusineysaa tayada ciidam ada (SNSF) ee hubinaya in dadka Sabiid iyo Bariire iyo in hantidooda la ilaaliyo oo aysan jirin jid-gooyooyin sharci-darro ah oo aan lah ayn canshuur sharci-darro ah ama meel ka dhac lagu sameeyo,” ayuu yiri Ambassador Madeira.
Ugu dambeyntii, Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Fra ncisco Madeira, ayaa sheegay iney sii soc on doonaan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay wadaan Ciidanka Xoogga dalka iyo AMISOSM.
GUDDOOMIYE MURSAL IYO FRANCISCO MADEIRA OO KA WADA HADLAY SHARCIGA DOORASHOOYINKA
Guddoomiyaha golaha shacabka Baarl amaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxm aan ayaa Shalay xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka mido wga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Ca eta no Madei ra. Guddoomiyaha iyo wa kiilka ayaa ka wada had lay xoojinta xiriirka iyo wa dashaqeynta 2da dhi nac, howlgalada wadajir ah ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka ee lagu xasilinayo dalka.
Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sharciga doorashooyinka ee horyaalla gol aha shacabka. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Caeta no Madeira ayaa guddoomiye Mursal la wad aag ay howlgalada ay wadaan ciidanka AMI SOM, waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidan ka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Sooma aliya si loo soo afjaro dagaalka lagula jira Al-shabaab.
Guddoomiyaha golaha shacabka Baarla maanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa amaanay doorka ciidanka AMISOM ee Soo maaliya. "Waxaan qir aya in ciidanka AM ISOM ay dadaal ku bixinayaan xasilinta iyo nabadeynta guud ahaan dalka iyo sidii Al-shabaab loo gu guuleysan lahaa, golaha sha cabka waxa uu diyaar u yahay inuu idiinku arab istaago shaqooyinka adag ee aad hey saan” ayuu yiri guddoomiye Mursal. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Xoghayaha guud ee golaha shacabka mud ane C/kariin Xaaji Cabdi "Buux”.
XAL LAGA GAARAY KHILAAF SOO KALA DHEX GALAY MAAMULKA D/BUUR-DHUUBO
Ka dib kulan saacado badan oo ka dha cay Xarunta Maaliyadda Degmada Buurdhu ubo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa xal looga gaaray Khilaaf soo kala dhexgalay Mas’uul iyiinta sare ee maamulkaasi.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay inta badan Mas’uuliyiinta Degmada Buurdhuubo Saraakiisha nabadasuguida iyo kuwa Ciida mada Xoogga dalka eek u sugan halka asi,isla markaana waxaa si buuxda loo xaliy ay Khilaaf maalmi hii dambe ka dhex jiray Madaxda sare ee Degmadaas.
Guddoomiyaha Degmada Buurdhuubo Xasan Muxumud Cali Xasan yare oo warba ahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in uu dhamaaday khilaafkii soo kala dhexjiray maamulka Degmada,isagoo xusay in wixii haatan ka dambeyn si wadajir ah loo wada shaqeyn doono.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Guddoo miye Xasan Yare in is bedel cusub lagu sam eeyay maamulka Maaliyadda degmadaas, iyadoona xilalka loo kala wareejiyay Xogh ayihii hore ee Maaliyada Buurdhuubo Cabdi Xasan Guuleed iyo Nuur Maxamed Sheekh Cumar.
Ugu dambeyntii Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo ee Dowlad Goboleedka Jubba lada ayaa shaac iyay in degmada ay la tartami doonto degmo oyinka kale ee ka jira Gobolka Gedo.
GOBOLKA MUDUG OO KA HOR YIMID XILKA QAADISTII LAGU SAMEEYAY
Cabdi Rashiid Xaashi Cartan oo ahaa Gud doomiyihii Gobolka Mudug ee xilka qaadista uu ku samee yay Ma daxweynaha dowlad Gobol eedka Galmudug Axmed Du caale Geelle Xaaf ay aa waxaa uu ka hor yi mid xilka qaadistii la gu sameeyay.
Cabdirashiid Cartan oo Goordhow shir Jaraa’id warbaahi nta u qabtay ayaa waxaa uu sheegay in Wa reegtadii xil ka looga qa aday aysan waxba ka jirin,isla markaana uu u hogaansami doo nin amarkii xilka looga
Sidoo kale waxaa uu sheegay Cabdirashiid Cartan in uu weli yahay Guddoomiyaha Go bolka Mudug lagana taagee rsan yahay hal kaasi,sidoo kalena dowladda Federaalka Soomaaliya laga taageersan yahay Gobolka Mudug.
Isaga oo sii hadlaayay ayuu Madaxw eynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ugu baaqay in uu u diyaar garoowo Do orasho Bisha soo socota July ee 2019 ,isla markaana waxaa uu tilmaamay in Galmud ug xriirka ay u jartay dowladda Soomaaliya uu ku egyahay oo kaliya Madaxweyne Xaaf.
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxwe ynaha Maamulka Galmudug Axmed Duca ale Geelle Xaaf ayaa xilka lo oga qaaday Gu ddoomiyihii Gobolka Mudug Cabdi Rashiid Xaashi Cartan,iyadoona loo magacaabay Cabdiraxmaan Cali Diiyire (Isxal)
GUDDOOMIYAHA AQALKA SARE IYO WAKIILKA MIDOWGA AFRIKA OO KULMAY
Gudoomiyaha golaha aqalka sare BFS ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Ga arka ah ee Midowga Afrika u jooga Soo maaliya Danjire Francisco Caetano Mad eira Iyagoo ka wada hadlay arimaha AMI SSOM iyo dowlad goboleedyada.
Kulanka oo saacado qaatay markuu soo gaba gaboobay ayaa waxaa ugu hor ayn saxaafada la hadlay Wakiilka Gaarka ah ee Mid owga Afrika u jooga Soomaaliya Danjire Francisco Madeira waxana uu Sheegay in kulanka ay gudoonka yeesh een uu ahaa mid muhiim ah oo looga had lay arrimaha Soomaaliya iyo howlgalka Midowga Afrika.
Habdhooraha golaha aqalka sare baar lamaanka Soomaaliya Senator Cabdikaafi Macalin Xasan ayaa sheegay in kulanka arr imaha looga hadlay ay ugu muhiimsan ayd mudo kordhinta AMISSOM iyo ari maha Doorashooyinka dalka.
Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka So omaaliya iyo Midowga Afrika Sooma aliya ayaa waxaa ka Dhaxeeya wada sha qayn, iyagoo mar marka qaar ay yeesh aan kul amo ay uga hadlayaan ammaanka Sooma aliya iyo howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
IIRAAN OO TIJAABISAY GANTAAL CUSUB
Gantaalkaasi oo lagu farsameeyey gu daha Iiraan ayaa waxaa loogu magac dar ay Khordad 15, wuxuuna awoodi karaa in uu hal mar hawada ku burburiyo 6 Gant aalladda caddowga soo tuuraan.
Wasiirka Difaaca Iiraan, Jeneral Amiir Hamtimi ayaana waxa uu Shalay goob joog ka ahaa Munaasabadda lagu tijaabin ayey Gantaal kaas Cusub, sida ay sheeg tay Wakaalladda waraka Iiraan ee IRNA.
Wasiirka oo ka hadlay Munaasbaadaasi waxa uu sheegay in Gan taalkaasi ogaan karo Diyaaradaha Dagaalka iyo Daroonis ka, isla markaana uu wax ka duqeyn karo masa afo dhan 120 KM.
Nidaamka Diffaaca ee Khordad 15 wax aa la sheegay inuu adeegsan karo Ganta alladda Sayad 3 ee lagu fars ameeyey gud aha dalka Iiraan.
MADAXWEYNE LAFTAGAREEN OO DIB UGU LAABTAY BAYDHABO DIGNIINA DIRAY
Wafdi uu hogaaminaayo Madaxwey naha Koonfur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa Shalay
dib ugu soo laabt ey Magalada Bay dha bo,Xili uu Ci mro u aadey M/Ba rakeysan Ee Mak kah ,
Madaxweynaha Iyo Wafdigiisa ayaa waxa goroonka Diyaaradaha Magaalada Bay dhabo Ku soo dhaweyayay,Mas’uuliy iin ka tirsan Dow ladda Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo G/Gollaha Wakiil ada ko onfur Galbeed Soomaaliya,Wasiiro,X ildhi baano ,odayaasha dhaqan ka, qey baha ka la Duwan Ee saraakiisha Ciidamada ,iyo Ururada Bul shada Ra’idka Magaalada Baydhabo Ee xaruunta Gobolka Baay,
Intaasi ka dib Madaxweynaha aya Wa xa loo soo Galbiyay Madax tooyada Koon fur Galbeed ,halkaasi oo Kullan is xog war eysi ah kula qaatey ,Gollaha wasiirada Dowlad Goboled ka Koonfur Galbeed Soo maaliya ,
Ugu Horen waxaa halkaasi ka Hadley G/Baarlamanka Koonfur Galbeed Mudane C/qaadir Shariif Sheekh una May e,isagoo na Madaxweynaha iyo Wafdigiisa ku soo dhaweyay Magaalada Baydhabo,
Madaxeynaha Dowlad Goboleedka Ko onfur Galbeed Soomaaliya Mudane C/Cas iis Xasan Maxamed Lafat-gareen ,ayaa waxaa uu ka Hadley Safarkiisa uu uga Maqana dalka sucuudi carabiya ,waxaa u na sheegey in kani uu ka duwan yahay safaradii shaqo la aadi jirey , Safarkan aan u aadney Cimro,Waxaan usoo ducey ay Dhamaan Mas’uulyiinta Koonfur Galb eed oo ugu Horeeyo Gudoomiyaha Gola ha wakiilada kg, isagoona sido kale uu sheegey in uu soo duceyay Kuwa Baraha Bulshada dhibaatada iyo Bur Burka Do wlad ka wada waxana Alle uga bariyeyaa in uu soo hanuuniyo ayuu ku sii darey.
Mudane C/Casiis Xasan Maxamed lafta-gareen Madaxweynaha Dowladda Koon fur Galbeed Soomaaliya , ayaa wax marn aba la aqbali Karin ku tilmaamey ,in Qof shacabka Ah Wax galabsan la dilo oo dilo Askari Shacabka Amnigiisa Ilaalin lahaa Qofkii Qof dila Waa ladilaa ayuu Yiri’ Madaxweyne C/Casiis.
ISU SOCODKA GAADIIDKA NAIROBI IYO MANDERA OO DIB LOO FURAY
Waxaa Shalay markale dib u billo wday isu socodka gaadiidka dadweyn aha ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka Man dhera iyo Nairobi kuwaas oo Dorraad ay dowladda Ke nya u hakis ay sababo amni la xir iira.
Kenya ayaa Dorraad sheegtay in jidadka lagu arkay maleeshiyo ka tirsan Al-Sha baab oo doo naya inay fuliyaan weeraro.
Cabdicasiis Cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee Maka ayaa VOA-da u sheegay in isu socoka gaadiidka ay Shalay dib u bilaabatay oo uu basko oduna haatan ku sii jeedaan Nairobi.
KENYA OO KA WALAACSAN WEERARO KAGA YIMAADA AL-SHABAAB
Gaadiidkii Dadaweynaha ee ka imaan jirey Degmadda Mandera ayaa waxaa sha lay laga xayiray inay u saf raan magaalada Nairobi, kadib, markii ay Boliska dalkaasi ka digeen cabsi la xiriirta weeraradda Alsh abaab.
Taliyaha Bolis Gobaleedka Mandera, Jeremiah Ole Kasiom ayaa sheegay inay heleen war ku aadan inay Dagaalamayaa sha Alshabaab qorsheynayaan inay beeg sadaan Gaadiidka Dadweynaha, waa sida uu hadalka u yiri.
Waxa uu intaasi ku daray inay Hay’a ddaha Ammaanka u baahan yihiin waqti, si ay ay uga fal celiyaan, ka hor inta aan Gaadiidka xamuulka loo oggolaanin inay dib u bilaabaan hawlahooda.
Taliyaha Bolis Gobaleedka Mandera, Jeremiah Ole Kasiom waxa uu tilmaamay in Basaska ka imaanaya Nai robi iyo Waj eer ee tegaya Mandera ay ku sii nagaan doonaan Degmadda Ceel-waaq, ilaa ay xaalladda caadi ka noqonayso.
Hakadka ku yimid Basaska ka baxa Mandera ayaa la sheegay inay ka damb ayso kadib, markii ay Hay’adaha Amma anka Kenya heleen Warar dhinaca Sirdo onka oo ay ku sheegeen in ugu yaraan 40 Dagaalamayaal Alsh abaab ka soo gudb een xuduudka Somalia, isla markaana ay gudaha u galeen Deeganka Lafeey ee dul eedka Mandera.
Isbuucii hore, Dagaalamayaasha Alsha baab waxay dagaal la galeen Ciiddanka Kenya, iyadoo iska horimaad kaasi la shee gay in lagu dilay Askari ka tirsan Ciiddan ka Kaydka ee Boliska Kenya.
MADAXWEYNAHA KGS OO DIGNIIN SOO SAARAY
Ka dib markii Shalay uu dib ugu soo laa btay Magalada Baydhabo ee Gobolka Ba ay Madaxeynaha Dowlad Goboleedka Ko onfur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed Lafat-gareen ,ayaa waxaa uu ka Hadley Safarkiisa uu uga Maqaaa dalka sucuudi carabiya ,waxaa una sheegey in kani uu ka duwan yahay safaradii shaqo la aadi jir ey dalkaas.
Waxa uu sheegay in Sa farkan aan u aad ey Cimro,isla mark aana uu u soo duc eeyay Dhamaan Mas ’uulyiinta Koonfur Galbeed oo uu ugu hor eeyo Gud doom iyaha Gollaha wakiilada KGS iyo ku wa Baraha Bulshada dhiba atada iyo Bur bu rka Dowladdaka wada waxana Alle uga bariyeyaa in uu soo hanuuniyo ayuu ku sii darey.
C/Casiis Xasan Maxamed lafta-gareen Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wax marnaba la aqbali Karin ku tilmaamey ,in Qof shacab ah oo aan wax galabsan la dilo,isaga oo ku hanjabay in qofkii qof dila la dili doono.
MADAXWEYNE XAAF "GURIGAYGA OO KU YAALLA MUQDISHO MA AANAN TEGIN MUDDO KU DHOW HAL
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Duc aale Geelle Xaaf ayaa waxaa uu sheegay in uu cu leys badan Gal mudug ka heysto dhan ka dowladda Federaal ka Soomaaliya,kadib markii xalay uu kul an la qaa tay dhalinyaro dalxiis baryahan dambe ku joogay Dhuusamareeb.
Madaxweyne Xaaf ayaa waxaa uu she egay in Gurigiisa oo ku yaalla Magaa lada Muqdisho uusan tegin muddo ku dhow hal sanno,isla markaana waxaa uu til maamay in Magaalada Cadaado uu diyaarad ku dul maro,waxaana sababta uu ku sheegay in ay tahay Culeyso badan oo jira
Isaga oo sii hadlaayay ayuu sheegay Madaxweynaha Galmudug in dowladda Federaalka mashaariic badan ay ka dha gax dhigtay deegaanada Galmudug,isla mar kaana aysan dib u fulin balan qaa dyadii hore ,wuxuuna Carabka ku adkee yay inay Galmudug isku tashan doonto.
Sikastaba Madaxweynaha Galmudug ay aa hore u shaaciyay in Galmudug ay xir iirka u jartay dowladda Federaalka Sooma aliya,waxaana Madaxda sare ee mam ulkaas ka dhex jira Khilaaf aad u xoogan.
NATIIJADA DOORASHADII KAZAKHSTAN OO LA SHAACIYEY
Madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalka Kazakhstan Kassym-Jomart Tokay ev ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuley stay doorashadi madaxtinimo ee Axadi Dorraad ka dhacday dalkaasi dhaca bartam aha Asia.
Guddiga dhexe ee doorashada Kaza khstan ayaa Shalay ku dhawaaqay in Kassym-Jomart Tokayev uu helay ku dhawaad 71 boqoliiba codadki la dhi ibay. Musharraxa u gu dhaw oo ah hogaamiya ha mucaaradka ninka la yiraahdo Ami rzhan Kosanov ayay guddigu sheege en inuu keenay 16 boqolkiiba codadka door ashada.
Laakin guddiga muraaqabeeyay doorash adi Dorraad ayaa cambaareeyay sida ay do orashada u dhacday, gaar ahaan xadg udubyo dhanka xuquuqda aasaasiga ah oo lag ula kacay dadweynaha oo ay ku jireen xarig loo geystay ku dhawaad shan boqol oo ru ux ka mid ahaa dad si nabad ah ku mudaaharaday.
Mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada la musuq maasuqay.
Doorashadan ayaa aheyd tii ugu horeysay oo dalkaasi ka dhacda muddo 30 sana ah, kaddib marki uu dhawaan is casilay hogaamiyihi mudada dheer xakumayay dalkaan Nursultan Nazarbaev.
WAFDI KA SOCDA DOWLADA SOMALIA OO SHIR UGA QEYB GALAY GENEVA
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Sadiiq Xirsi Warfaa oo hoggaaminaya wafdi saddex-geesood ah ayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland kaga qeybgalay shir weynaha shaqada adduunka oo halkaa Sha lay ka furmay.
Inka badan 5,000 oo wakiillo oo ay ku jiraan 40 madaxda dowladaha ayaa sidoo ka le shirka ka qeygalaya, kaas oo ku soo aadday sannad-guurradii boqollaad ee hey’ adda shaqaalaha adduunka.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya, Sadiiq Warfaa ayaa mudda da uu shirka socdo waxaa uu ka jee din doonaa khudbad uu diiradda ku sa arayo shaqo la’aanta ka jirta dalka , sidii dalka looga hirgelin lahaa nidaam shaqo oyin u abuuraya muwaadiniinta iyo shaqo abuuro loo helo dhallinyarada Soomaaliyeed.
Wasiir, Sadiiq ayaa sidoo kale dedaal ugu jira sidii ay Soomaaliya dib ugu soo ce shan lahayd xubnimada ururka shaqaal aha adduunka loogana cafin lahaa deyn lagu leeyahay dalka muddo dheer taas oo ah dhaqaalo ay urur ka ku taageeran sannad walba dowladaha xubnaha ka ah, waxaa kalo uu kulan doceedyo la qaadan doonaa mad axda dalalka caalamka iyo wakiillada kale ee shirka ka qeybgalaya.
Shir weynaha shaqada caalamka ee maa nta Geneva ka furmay ayaa socon doona illaa 21-da bishan
RA’IISUL WASAARE KHEYRE OO LA KULMAY WAFDIGII MRS. MARIE ERIKSEN
Gelinkii dambe ee Shalay ayay soo gaartay M/Muqdisho Wasiirka arrimaha di badda Norway Marie Eriksen Søre ide, waxaana Garoonka Diyaaradaha Muq di sho kusoo dhaweeyay Ra’iisul Wa saare ku-xigeenka dalka iyo qaar kamid ah golaha Wasiirrada Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa soo dhawaynta kadib, waxaa xafiiskiisa ku qaabilay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre.
Kulanka ay yeesheen Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Ine Marie Eriksen Søreide, ayaa looga hadlay xoojinta xariirka soo jireenka ah ee labada dowladood.
Ine Marie Eriksen Søreide oo Ra’iisul Wasaaraha uga mahad-celisay soo dha waynta loo sameeyay, ayaa am maa ntay horumarka muuqda ee Soomaaliya ay ku tillaabsatay, isbedellada iyo dib-u-hab eynta ballaaran ee ay dawladda Sooma aliya ka waddo hay’adaha dowladda si dalku u gaaro dib-u-kabasho dhamays-tiran.
Norway ayaa qayb ka ah wadamada So omaaliya ka taageera nabadayta, barna amijyada horumarinta iyo bini’aadni nim
WADADA XIRIIRISA JOWHAR IYO DEGMADA MAHADAAY OO GO’DAY
Wararka laga helayo Gobolka Shabe ell aha dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Wa biga Shabeelle uu fataha ad xo oggan uu ka sameey ay deeg aanno u dhow M/J owhar ee Xarunta G/ Sh/ Dhexe.
Waddada isku-xirta Magaal ooyin ka Jowhar iyo Mahadaay ayaa la she egay in Waddada u dhaxeysa uu gooyay fa tahaada Wabiga Shabeelle,waxaana istaag ay isku-so codka dadka iyo Gaadiidka.
Sidoo kale Fatahaada uu sameeyay Wabiga Shabeelle ayaa waxaa uu baabi’i yay Dhul beereed ku yaalla Gobolka Shab eellaha Dhe xe oo qaarkood ay ku yaalleen dlagyo kala duwan.
Deegaanada uu saameeyay Wabiga Shabeelle ayaa waxaa ka mid ah deegaan ada Xa anshooley iyo Lebiga oo u jira M/J owhar wax yar ka 3km, iyada oo dadkii ku noolaa qaark ood inay ka barakacaan si uu san saameyn u gu yeelan fatahaada Wab iga.
Sanadkasta markii la gaaro xilliyada Ro ob ka ayaa waxaa Wabiga Shabeelle uu sameeyaa fatahaad kala duwan taas oo saa meyn ku yeelata badi dadka ku nool gobol ka Shabee llaha Dhexe.
TALISKA CIIDANKA XOOGGA OO SOO BAN DHIGAY SARAAKIIL KA TIRSANAA…
Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaa liy eed ee Gobolada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa Shalay waxaa ay soo bandhigeen la ba Sarkaal oo horay uga tirsanaa Al-Shab aab balse isku-soo dhiibay Cidanka DFS Saraakiishaan ayaa la sheegay inay ka ho wlga llayeen deegaanno ka tirsan gobolada Ju bb ooyinka,waxaana lagu soo bandhigay D/ Baar dheere ee Gobolka Gedo.
Taliska Guutada 10aad ee qeybta 43-aad ee Ciidamada xoogga dalka ayaa Saraaki Isha isa-soo dhiibay Magacyad ooda ku kala sheeg een Mustaf Ibraahim Isaaq oo Shabaab u qaa bilsanaa qeybta Sirdoonka & Maxamed Xasan Ma dhaaleey oo Shabaab u qaabilsanaa ilaalin ta Xabsiyada Al-Shabaab ee qeyb ta Gobola da Jubbooyinka.
Taliyaha Ururka 49aad Guutada 10aad ee qeybta 43aad ee Ciidamada xoogga dal ka Dhamme Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in howlgalladii ay maalamahaan ka wad een deegaanno ka tirsan gobolada Jub ooyin ka ay sababeen in saraakiil ka tirsan Al-Shab aab ay isa soo dhiibaan.
Waxa uu ugu baaqay dhalinyarada weli ka barbar dagaalama Al-Shabaab inay ka faa’iid eystaan baaqii cafinta ahaa ee Mad axweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaa jo,isla markaa na cid kasta ay soo dhawey nayaan
OGEYSIISKA DIGNIINTA EE CALAMADA GANACSIGA
OGAYSIIS WAA BIXIYAY in calaamad ganacsi ee kor ku xusan waa hantida Near East Olive Products Company of Mharde, Hama, Syrian Arab Republiciyo in calaamad ganacsi oo isku mid ah loo isticmaalo alaabooyinka soo socda:
Boodhadhka cuntada; saliida sayniska ee cuntada.
OGAYSIIS WAXAA KA BIXIYAY Shirkadda Suuqyada Near East Olive Products Companywaxay sheegaysaa dhammaan xuquuqda marka la eego calaamadda ganacsiga ee ku taala Soomaaliya waxayna bilaabi doontaa tallaabo sharci ah oo ka dhan ah qof kasta ama qof lagu helo in la adeegsanayo calaamad ganacsi ama calaamad kale oo ganacsi ama si khalad ah , ama haddii kale xadgudub ku ah xuquuqdiisa
OGAYSIIS WAA BIXIYAY in calaamad ganacsi ee kor ku xusan waa hantida Shirkadda Near East Olive Products Company of Mharde, Hama, Syrian Arab iyo in calaamad ganacsi oo isku mid ah loo isticmaalo alaabooyinka soo socda:
OGAYSIIS WAXAA KA BIXIYAYShirkadda Suuqyada Near East Olive Products Companywaxay sheegaysaa dhammaan xuquuqda marka la eego calaamadda ganacsiga ee ku taala Soomaaliya waxayna bilaabi doontaa tallaabo sharci ah oo ka dhan ah qof kasta ama qof lagu helo in la adeegsanayo calaamad ganacsi ama calaamad kale oo ganacsi ama si khalad ah , ama haddii kale xadgudub ku ah xuquuqdiisa.